TAKSIBE AO MAHAJANGA : Voatery naato ny fitaterana ataon’ny zotra fahafito mihazo an’i Tsaramandroso
Fanapahan-kevitra vonjimaika noraisin-dRahantanirina Lalao, solombavambahoaka voafidy teto Mahajanga voalohany io, ny marainan’ ny alarobia 18 marsa teo. 19 mars 2020
Niteraka savorovoro teo amin’ny samy mpitatitra mitrandraka ny zotra eto ambonivohitra ny nanitarana ireo ampahan-dalana vitsivitsy handehanan’io zotra iray mampitohy ny Belobaka plaky 7 io. Manoloana ny foibe nisy ny trano kolotoraly malagasy Frantsay teo aloha etsy amin’ny Bord no nisy ny fiantsonana ho an’ny zotra fahafito. Dia mbola eo ihany no misy izany ankehitriny, saingy nozaraina ho sampanan-dalana mihazo ny Tsaramandroso ny iray sy ny faritra Mahajanga be.
Saran-dalana 400 Ariary toy ny teo aloha no itaterany ny mpandeha, fa noitarina mihodina any amin’i La corniche ny lalan’io taksibe zotra fahafito io, nanomboka tamin’iny herinandro lasa teo iny. Niteraka resabe tao amin’ny fandaharana "Famohamandry" eto amin’ny M3tv ny fitsabahan’io zotra iray io ny ampahan-dalan’ny zotra hafa.
Ny taona 2012 dia notapahina tao amin’ny filankevitra monisipaly eto Mahajanga sy ny tompon’andraikitra misahana ny fitaterana eto ambonivohitra fa miato ny fanokafana ny zotra vaovao sy ny fanitarana izany. Goragora ny fampiharana ny lalàna teo, ka samy nanao ny saim-pantany avy ny tompona kaoperativa sasany, dia nanitatra ny azy ny tao amin’ny zotra fahavalo hatreny Ankaraobato Amborovy. Izay nambaran’ny mpiandany ny zotra fahafito voatonontonona fa nanitsaka sy nitsabaka ny lalany ny zotra fahaenina izany fihetsiky ny kaoperativa Mahatsinjo io.
Vao tsy ela koa dia hita fa nanitatra ny fiantsonany teny amin’ny trano mavo Rn4, ka notohizana hatreny amin’ny plaky 7 ambany ary miakatra ny cmeam ny fiantsonan’ny zotra fahatelo ao aminy kaoperativa Miray. Nanaitra ny zotra fahafito izany satria araka ny nambaran’ireo mpamily lasibatra fa nampihena ny vola miditra isan’andro eo amin’izy ireo sy ny mpampanofa fiara ny fanakaikaizan’ny zotra fahatelo ny fiantsonan’izy ireo. Dia nanitatra ny azy andro vitsy lasa izay ihany koa ny kaoperativa Mamy, tompon’ny zotra fahafito ka nozarainy sampanan-dalana roa ny azy. Ny iray mihazona ny lalana efa nahazatra ny mpanjifa hatramin’izay aty Mahajanga be, ary ny taxibe sasany kosa mivily eo Mahabibo mihazo ny lalana mankany Tsaramandroso.
Raikitra ny savorovoro teo amin’ireo kaoperativa lasibatr’izany fanitaran-dia nataon’ny zotra fahafito izany, ka niakatra ny fahitalavitra M3tv izy ireo ny alatsinainy teo, ho tsy hanaiky ny fitsabahan’ny zotra fahafito io any amin’ny lalan’izy ireo. Satria tokoa, dia voahitsaka ny lalan’ny zotra fahadimy, ny fahavalo, fahasivy, fahafolo, fahairaika amby folo ary ny fahatelo amby folo, noho ireto taxibe ireto mampifandray ny ampahan-dalana sasany lalovan’ity farany.
Nody ventiny ny rano natsakaina ho an’ireto tonga nitory an’ity kaoperativa iray nanitatra ny lalany io, ka voatery naato vonjimaika ny fitaterana mihazo ny Tsaramandroso, ny marain’ ny alarobia teo. Haverina ho dinihana ao amin’ny mpanolotsain’ny tanàna ny hikaroham-bahaolana ho an’ity disadisa ity, satria ireto farany no nanaiky ny bokin’andraikitra sy nankato ny fitsabahan’io zotra fahafito io any amin’ny zotra hafa eto ambonivohitr’i Mhajanga.